Bandhigga Caalamiga ah ee 12-aad ee Buugaagta Hargeysa oo Furmay iyo Waxa ku Cusub Sannadkan | Aftahan News
Bandhigga Caalamiga ah ee 12-aad ee Buugaagta Hargeysa oo Furmay iyo Waxa ku Cusub Sannadkan
“Maanta ii oggolaada inaan ahay Oday dhaqameed reer Yurub ah oo Somaliland jooga…” Safiirka Midawga Yurub ee Soomaaliya Amb Nicolás Berlanga Martínez
Hargeysa(aftahannews):- Munaasibadda Bandhiga Caalamiga ah 12-aad ee Buugaagta Hargeysa, ayaa ahayd mid si weyn loo soo aggaasimay, isla markaana sabtidii maanta si rasmi ah Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland uga furay Xarunta Dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo soo qaban-qaabisa Carwada Buugaagta.
Safiirka Midawga Yurub u qaabbilsan Soomaaliya u qaabbilsan Midawga Yurub Nicolás Berlanga
Ambassador Nicolás Berlanga Martínez, waxa uu markii uu ka hadlayay Madasha si lama filaan ah ugu Lebistay Koofiyadda Odayaasha iyo Cumaamadda Madaxda dhaqanka Soomaalidu qaadato oo uu madaxa iyo garabka saartay, isagoo muujinaya dhaqanka ay ka turjumayso Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa oo boqollaal qof oo Soomaali iyo Ajaanib ah ay ka qaybgaleen. “Maanta ii oggolaada inaan ahay Oday dhaqameed reer Yurub ah oo Somaliland jooga. Farxad bay ii tahay inaan arko Buugaag ku qoran afaf kala duwan iyo kuwo ay sixitaan ku samaysay xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Midawga Yurub farxad bay u tahay inuu taageero arrimaha noocan oo kale ah.” ayuu yidhi, Ambassador Berlanga oo mar keliya munaasibaddii u beddelay sacab iyo qosol lagu soo dhowaynayo lebiska uu xidhay iyo siduu u beddelay muuqaalka manbarka isla teegay markii uu kacay.
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa si rasmi ah u furay Bandhigga, ayaa sheegay inay farxad u tahay ka qaybgalka Bandhigga 12-aad ee Carwada Buugaagta Hargeysa, waxaanu yidhi; “Waxaa farxad weyn ii ah, dhammaanteenna farxad u ah inaan ka soo qaybgalno Bandhigga caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa sannadkii 12-aad, oo qiimo weyn innagu jooga. Waxaan marka hore u mahad-naqayaa dhammaan martida sharafta badan ee dunida dacalladeeda innooga timi ee inna soo sharaftay. Waxay gudbisaa xaruntani farriimaha aynu rabno inay gaadhaan dunida aynu ictiraafka ka doonayno.”